Ọ bụla ọzọ Software Dị ka Nero? Edozi.
> Resource> DVD> Nweta Best Software Dị ka Nero
Ọ bụ ezie na Nero bụ otu n'ime ndị kasị ama DVD ọkụ ngwa ọdịnala na ahịa, ọ na-apụghị izute gị mgbe ụfọdụ. Ka ihe atụ, e nweghị Mac Nero version. Ma ọ bụ na ị chọrọ ihe atụmatụ, sịnụ, ka DVD menu ma ọ bụ tinye n'okirikiri wdg N'agbanyeghị ihe mere ma ọ bụrụ na ị chọrọ ihe dị ka Nero, ị nwere ike nweta ihe ezigbo usoro dị ka Nero ebe a.
N'eziokwu, e nwere ọtụtụ nke DVD ọkụ software dị ka Nero na ụwa. Otú ọ dị, isiokwu a, m ga-ewebata Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac) - a oké ngwa n'ụzọ yiri Nero ọbụna karịa ka Nero n'ụzọ ụfọdụ. Na ya, ị nwere ike ire fọrọ nke nta n'ụdị ọ bụla nke video faịlụ (eg. MOV, AVI, MPEG, MP4, VOB, MKV, MTS, M2S, FLV wdg) ogologo jidesie a DVD diski. (DVD-5 na DVD-9 akwado; DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-Ram.) Ndien ekele ya free DVD menu template n'ọbá akwụkwọ na kemfe editting ngwá ọrụ, ọ na-ahapụ gị hazie gị onwe gị DVD menu, tinye ndabere music / Foto dị, akuku, ewepụtụ, bugharia videos na-eme ihe ngwa ngwa na-adị mfe. Ma Windows na Mac version dị ebe a. Dị nnọọ na-nri version na-ezo aka zuru ezu Nduzi na Windows. (Rịba ama na nzọụkwụ on Mac ndị yiri nnọọ.)
1 Import vidiyo ma ọ bụ foto
Mgbe ị na-agba ọsọ a usoro dị ka Nero, ị nwere ike mbubata media faịlụ na 2 ụzọ: kpọmkwem ịdọrọ na dobe vidio ma ọ bụ foto n'ime nke a ngwa-ekpe ebi ndụ ma ọ bụ pịa Import bọtịnụ tinye ha. Mara na ị ìgwè a ole na ole videos ọnụ na-etolite a isi site na-agbakwụnye a aha. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ ha, dị nnọọ ihichapụ aha na ị kwukwara. Ịgbanwe video usoro, dị nnọọ pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala.
The wuru na-video nchịkọta akụkọ na-ahapụ gị welie gị video faịlụ, gụnyere akuku, Kpaa, bugharia, watermark, mmetụta, wdg na-agba ọsọ a video nchịkọta akụkọ, nanị mata a video na pịa "Dezie" button ịbanye n'ime ya editting window. All mgbanwe ga-etinyere ozugbo na ị nwere ike ihuchalu utịp ke reall oge.
A na ngwa yiri Nero na okwu nke DVD ọkụ, ma dị mma karịa Nero site àjà gị nza nke jụụ atụmatụ, sịnụ, ịhazi gị DVD menu. Dị nnọọ ịgbanwee gaa na NchNhr taabụ na n'elu, na mgbe ahụ họrọ otu menu template-amasị gị, na-esote, hazie ya na ọkacha mmasị gị ndabere image, ndabere music, item ọnọdụ, button, ederede, wdg Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa a menu, dị nnọọ họrọ "Ọ dịghị NchNhr". Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị ọzọ, pịa green ala akụ button ibudata ọzọ free menu ndebiri.
Iji hụ na gị na DVD fim anya oké, ị nwere ike pịa "Preview" taabụ ka ịhụchalụ gị DVD nkiri na ezigbo oge. Ke akpatre, fanye a ide DVD diski gị dvd ọkwọ ụgbọala na pịa "Ọkụ" button na ala-nri akuku nke interface na-amalite na-ere ọkụ DVD diski na nke a software dị ka Nero.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na ndị size nke ndị a kwukwara media faịlụ ibu karịa 4.7G (DVD5), ma ị na-adịghị a DVD9 diski (7.9G) na fanye a DVD5 diski kama, usoro ihe omume ga-akpaghị aka mpikota onu gị faịlụ dabara a DVD5 diski (4.7G).
Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka ajụkarị DVD kpatụ aka gaa na Issues